Mmezi Kọmputa, Akụrụngwa & Akụrụngwa - Mmelite Kọmputa
Kọmputa chọrọ mmelite oge niile, ndozi, mmelite na oge ụfọdụ na-arụkwa ọrụ.
Maintenancenọgide na-arụzi kọmputa pụtara ị hụ na kọmputa na-arụ ọrụ zuru oke, na-ewepụ njehie, na-agba ọsọ ọsọ, na-echekwa kọmputa gị nke ọma. N’iburu nkwalite nke teknụzụ n’uche, kọmputa chọrọ mmelite na mmelite oge niile. Nke a pụtara, otu oge na mgbe ị ga-nweta nkwalite software na ngwaike nke na kọmputa gị.
Anyị na-enye gị ndepụta nke ndị ọkachamara nwere ike inyere gị aka ịrụzi na ndozi kọmputa.
Mmelite ngwanrọ gụnyere mmelite antivirus, windo, ihe egwuregwu, ndị ọkwọ ụgbọala, wdg, ebe ngwaike ngwaike gụnyere ịgbakwunye draịva siri ike ịgbakwunye nchekwa, nkwalite ebule iji mee ka kọmputa dị ngwa, ịgbakwunye eserese eserese, ịgbakwunye kpo oku ọkụ ma ọ bụ melite CPU, wdg. kwalite na nke kacha mma software na ngwaike ana achi achi kwesịrị ekwesị ịrụ ọrụ na nche.
Ọ bụ ezie na ndị mmadụ n’otu n’otu na-atụle ịtụfu nsogbu ma ọ bụ idozi njehie n’onwe ha, mana ọ na-atụ aro ka ị were onye ọkachamara na-ahụ maka kọmputa na-ahụ maka ijide n’aka na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ma ị nwere ọrụ kacha mma.
Mmezi, nkwalite, mmelite
Gịnị bụ kọmputa?
Kọmputa bụ ngwaọrụ eji arụ ọrụ dị iche iche. Kọmputa dị nha dịgasị iche iche ma ejiri ha rụọ ọrụ dị iche iche na-enyere aka ịchekwa oge na ego. E nwere ọtụtụ ngwanrọ dịnụ nke na-enyere aka ịhazi ọrụ dị iche iche nke ọma.
A na-akpọkarị sọftụwia ahụ dị ka ngwa, nke na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ma na-eme ka usoro ahụ dịkwuo mfe. Nke a na - eme ka njikwa dị mfe karị.
na acho ha acho ihe na acho ime ka ha nweta ihe ngwaihu na komputa komputa gi. Ha ga-enyere gị aka na ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na sọftụwia na-akwado ezigbo ọrụ kọmputa gị.
Ndepụta ọrụ ndozi kọmputa anyị gụnyere ndị ọkachamara na mpaghara na ndị na-ahụ maka ịntanetị nke nwere ike inyere gị aka na nsogbu ọ bụla ma ọ bụ obere nsogbu na kọmputa gị. Ọ bụghị naanị na ha na-enye gị ndụmọdụ kamakwa na-enye gị ndozi na melite ọrụ dabere na mkpa gị.
Have nwere nhọrọ iji dozie ndị na-enye ọrụ site na mpaghara ma ịnwere ike iji nhọrọ iji were ndị ọrụ azụmaahịa na-arụzi kọmputa dozie mpaghara gị.
Mgbe enwere nsogbu na ngwaike kọmputa ọ ga - akpata nsogbu na ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ ya. Na-agbakwụnye ngwaike ọhụrụ, sọftụwia dịka draịvụ buru ibu, kaadị grafik ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa iji mee ka kọmpụta ahụ dị ngwa mgbe achọrọ nkwalite ngwaike na ngwanrọ ụfọdụ.
Idebe kọmpụta gị na sọftụwia na ngwaike kachasị ọhụrụ abụrụla ihe dị mkpa, ọkachasị mgbe ihe niile na-emelite. Inweta ọhụrụ na kwalite ngwaike na ngwanrọ dị ka ndịna-emeputa kaadị, draịvụ ike, windo wdg na-enye ohere kwesịrị ekwesị njikwa nke ihe aga-eme na Filiks were were.